वर्तमानमा जिउने कला छ नयाँ वर्षमा | मझेरी डट कम
Biju Subedi — Sat, 04/29/2017 - 17:30
उकाली ओराली पार गर्दै २०७३ साल पनि वितिसक्यो । २०७४ सालदेखि हरेक पल आशा गरे अनूरुप मङ्गलमय होस् यही शुभ–कामना गरौं । नूतन वर्षको स्वर्ण रश्मीले छरेर गगन आल्हादित होस् । समुच्च विश्व नै हर्षित, प्रमुदित र उत्साहित होस् । हृदय सरोवर होस् । वन्धुत्व सर्वत्र छाओस् । जनजनमा उल्लास आओस् । यस्तो खुसी आओस् जसले भेदभाव तोडिदेओस् । नवल लालीले सारा जगतलाई उन्मादित गरिदेओस् । आयो नयाँ वर्ष तपाईंको दैलोमा, ढकढकाइरहेछ बारम्बार ढोकामा । वितेका वर्षका भारी विसाई ल्याइसक्यो नयाँ प्रेम उमङ्ग । दुबै हात फैलाई स्वागत गरेको छु नव वर्ष तिमीलाई । ईंश्वरलाई पनि धन्यवाद दिएको छु । आउनुहोस् सबैजना नयाँ वर्षको पहिलो कुञ्ज प्रभातको मिर्मिरे हेरौं । अनि सङ्कल्प गरौं । मेटौं आपसी वैरभाव । आपसमा बाडौं उपहार । सबैजना बनौं साथी आत्मीय । सबै समाज मिली देशलाई प्रेमील बनाऔं । नयाँ उमङ्गले सिकौं भुलिसकेको प्रेमलाई । संसारलाई भनौं “हामी एक हौ”ं । यही विजयको प्रेमले सबैलाई दिऊँ नयाँ वर्षको शुभ–कामना ।
पहिलेको जे छ राम्रो त्यसलाई लिएर अघि बढौं । पहिलेको जे छ खराब त्यसलाई भुलौं । नयाँ सपनाका साथ होस् तपाईंकोे त्यो उमङ्ग । जीवनको डोर त त्यही पुरानो हो तर उडाऔं नयाँ चङ्गा । गरेर आफ्नो हौसला बुलन्द, अघि तपाईं बढ्दै जानुहोस् । पहिलेका गल्ती अब नदोहोर्याउनुहोस् , त्यसबाट शिक्षा लिनुहोस् । जीवनमा जतिसुकै ठूलो भूकम्प आएता पनि हिम्मतले साहसका साथ सामना गरौं । आफूलाई मजबुत पारौं, गाह«ो साँघुरोबाट कहिल्यै नडगौं । जीवन हो अथाह सागर, सदैव यसमा बढ्नुहोस् । तपाईंको नाउलाई चलाउने बहानाले तपाईंकै हातले किनारामा ल्याउनु छ । प्रेमभाव, आदर, भक्ति विश्वासमा सदा अटल हुनुपर्छ । कसैलाई त किन अपशब्द गरी आफू खराब हुने ? सपना देख्न नछोड्नुहोस् । विपना बनाउन असन्तोष पनि चाहिन्छ अनि हुन्छ सपना साकार । कोशिशले हरेक साल बाँध्दै जानुहोस् गाँठो । त्यही गाँठोको सिँढीमा परिपक्वताका साथ उक्लिनु छ नयाँ चढान । एउटा नयाँ आकाशमा उडान भर्नु छ । एउटा नयाँ दिशामा अवश्य सफल होइन्छ ।
वितेको सालले जे पूरा गर्न सकेन त्यो कार्यभार अब नयाँ वर्षलाई आयो । आपसी झैंझगडा मनमुटावहरूका विष फाल्ने तपाईंको काँधमा आयो । ग्लोबल वार्मिङ्गका कारण जनजीवन दुरुह छ । संगठीत भएर कार्य गरी नयाँ किरणले बचाउनु छ यसलाई । विवश छन् कति निरीहहरू आत्महत्या गर्न । अब त्यस्तो गर्न नपर्ने गरी नयाँ क्रान्ति ल्याउनु जरुरी छ । अन्धविश्वास, अज्ञानता, अमानवीयताको दुश्चक्रमा फसेको छ सर्वत्र समाज । यसले प्रगति रोकिएको छ । आर्जित गरेर ज्ञान, सगरमाथाको चुचुरो चुम्नु छ । नैयालाई डुब्नुबाट पार लाउनु छ । धर्म, जात, भाषाका जञ्जीरले एक आपसमा वैमनष्यता फैलाइएको छ , त्यसलाई मानवताले मिलेर हामी सबै एक हुनु छ ।
स्वागत छ नयाँ वर्ष तिमीलाई । नयाँ किरण फैलाऊ तिमी । फोकटमा नवितोस् यो अबको नयाँ वर्ष । सुल्झाउन सकोस् नयाँ रुपले । समाधान होस् सबैको लक्ष्य । नयाँको यो उमङ्ग साँच्चिक्कै सुअवसर हो । हामी सबै नयाँ वर्ष अङ्गालिरहेका छौं । पुरानो सालको निर्जन, सुख्खा, बाँझो पनि झेल्यौं । अब हुनेछ नयाँ उमङ्ग । भूकम्प, नाकाबन्दीले थिलथिलो पार्दा हामीले रुनु परेको थियो । अझै आलो घाउ भरिएको छैन । त्यसलाई मलमपट्टी गर्नु नै छ । हाम्रो खुसी हामीसँग कुरा गर्न खोज्दा पनि एक्लो छ । यी सम्पूर्ण कुराहरूको लेखाजोखा गरिरहँदा हाम्रा तमाम विश्वासहरू डिगमिग भइरहेका छन् । भ्रष्टाचारको जालो खत्तम भएमा जनताले केही राहत पाउने थिए । हरेक नयाँ वर्षमा सफल हुन असफल प्रयासहरू भइरहेका छन् । हो कि ? होइन कि ? तर यो साल सफल हुन्छ भत्रे लागेको छ । हरेक दिशाको कुना–कन्दराबाट जुन पुकार आइरहेको छ त्यही आवाजले हरेक दुःखीयारीहरूमा खुसीयाली ल्याउनु छ । हरेक चेहरामा उदासी भगाई उत्साहित बनाउनु छ । एकपटक फेरि शुभ–कामनाले भारी बनाएर बहार फैलाऔं ।
कालको प्रवाहबाट निक्लेर अगाडि खडा हुन्छ नव वर्ष फक्रिएर र गर्न थाल्नेछ निवेदन र याद दिलाउने छ हाम्रो निरीह वचन । समयको नदीको तटमा चिन्तन एकान्तमा बसेर, गरेर प्रतिक्षा, नयाँ वर्षको अवसर ल्याउनका लागि म आफैँ नव वर्षसँग संवाद गर्न थालेँ । के भयो तिम्रो जे गरेका थियौ तिमीले वाचा केही मसँग, केही अरुसँग, केही आफूसँग र केही अन्यबाट पनि । लिएको थिएँ केही निर्णय मैले हाँसेर भनेँ । वाचा, कसम, निर्णय कुन जमानाको नव वर्ष हौ तिमी ? दिल बहलाउने एउटै तरिका छ, हरेक नव वर्ष यो पक्का छ । कैयौं वर्षको हाम्रो तपस्या छ । यदि तिमीले गम्भिरताले लिएमा अवश्य सफल हुनेछ नत्र यस्तै होइनेछ । मैले फेरि सोधेँ । हामीलाई नयाँ वर्षमा केही होइन पूरै नयाँ चाहिन्छ । त के नयाँ वर्षको कामना खराब हो ? नयाँ वर्षको उमङ्गको पहिलो दिन राम्रा–राम्रा बाचा गरिनेछन् । हरेक साल जस्तै वर्ष वित्दै जाँदा अभिलाषा घट्दै नजाउन् । धेरै उदासी हामीले विगतका नयाँ वर्षहरूमा झेल्यौं । के हामीले यसलाई भुल्न सक्छौं ? हामीले धेरै आँसु झारी सक्यौं अब खुसीको आँसु ल्याउनु छ यो नयाँ वर्षले ।
गीत नयाँ गाउने कि के ! धुमधाम मनाउने कि के ! आफूलाई मस्तीले हदैसम्म भुलेर नयाँ वर्षको स्वागत गर्छन् सबैजना । बेलगाम जिन्दगीलाई एकदिन डुबाएर कहाँ सधैं ३६५ दिन यस्तै हुन्छ र ? वर्षको आखिरि दिनको आखिरि रात मात्र क्यालेण्डर परिवर्तन भइरहेछ । सबैका जिन्दगी उस्तै छ । बस् नयाँ वर्ष मनाउने तरिका परिवर्तन हुनु जरुरी छ कि जसले ३६५ दिन नै सुखद बनाओस् । एउटा अरु वर्ष वितिगयो । वितेका समय साथ हामी पनि त वितिरहेछौं । हामी बूढो हुँदैछौं यसलाई नस्विकारौं । हामी वरिष्ठ हुँदैछौं, परिपक्व हुँदैछौं यसलाई स्विकारौं । अनि हामीमा सदा उमङ्ग हुनेछ । यही उमङ्गको रश्मीले कालरात्रि मेट्नेछ । उमेरको जुन पूँजी छ यो दुनीयाँको प्रगतीमा लगाऔं । नेताको भाषण जस्तो पूरा नहुने वाचा–कसम नहोउन् । गरेका वाचा–कसम सबै पूरा होउन् । साँच्चै नयाँ वर्ष नवीनताको पखेटा हो र पलपलको उडानले जूनताराको सयर गर्न पाउने छ । धर्तीमा सुगन्ध आउने छ । आशा कहिल्यै कृतिम नहोउन् । नाच्नेछन् कठपुतली पनि, आशाले बाँसुरी बजाउने छ । मनमा धर्ती हुनेछ र धर्तीभरि सुन हुनेछ । जिन्दगी बदलेको छैन । मात्र हामी धेरै अभिलाषा गर्छौं नयाँ वर्षमा अनि भन्छौं “विगतको गल्ती नदोहोर्याऔं । नयाँ समय आउँछ तर सोचेजस्तो परिवर्तन भइरहेको छैन । अभिलाषा पूरा भएन ।” समाजको समस्या यस्तो छ कि यसको ग्राफ यू (U)आकारले नघुमी सुल्झेला जस्तो छैन । सञ्चीत भएकोे नयाँ वर्षको अभिलाषाको कथा सुनाएँ यसरी मैले यहाँहरूलाई ।
तसर्थ बुलन्द हौसला हुनुपर्छ । हर सपना साकार हुनुपर्छ । वितिसकेको समय जो वितेर गयो । समयले जतिसुकै कोल्टे फेरे पनि तपाईंको त्यो वर्तमान नै हो नयाँ वर्ष । अगाडिको समय सबै त पूरै सोह्रै आना आफ्नो नै आफ्नो हो नि ! अनि किन धकाउने ? आउन दिनुहोस् ती नयाँ पलहरूलाई । नयाँ समय आउने जाने क्रम त भइरहन्छ वितेका समयको खराब कुराहरू त्याग्दै असल कुराहरूलाई निरन्तरता गर्दै वर्तमानमा जिए कुनै फिक्रीबिना अवश्य नै सुनमा सुगन्ध हुनेछ । तपाईंले अन्धकार मेटाउन बालेको दियो निभ्न सक्छ, यसलाई टिकाउन सचेत हुनैपर्छ । जिऊँ त जिऊँ होशपूर्वक वर्तमानमा प्रत्येक पल जिऊँ । सफलता यसमै छ । प्रत्येक समयको दृढ सन्देश यही छ र यसैले अवश्य ल्याउने छ सदा वसन्त । कालो बादलमा पनि चाँदीको सुनौलो टलक हुन्छ यही त हो नव वर्षको सन्देश र यसरी वर्तमानमा होशियारीका साथ जिउनुपर्छ भत्रे यत्ति ठूलो र उत्कृष्ट गन्तब्य देखाएको छ नयाँ वर्षले ।
नोट :– यो लेख २०७४ बैशाख १ गते नेपाल समाचारपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा पनि प्रकाशन भइसकेको छ । साथै ढिलै भए पनि नव वर्ष २०७४को शुभकामनामा साथ यो नववर्ष सम्बन्धी निवन्धात्मक लेख यस मझेरी डट कमका पाठकहरुका लागि पेश गरेको छु ।
तिमी नभएर शहर सहर जस्तै छैन
हल्लै हल्लामा चलेको देश नेपाल
तिमी जस्तै हजार देख्छु
नाम राख्ने खेती
लुकेका महादेव निकाल्ने जात्रा पाहाँ चःह्रे
उकालीमा तिम्लाई भेट्न चौतारीमा आउन गाह्रो
लिपुलेक कालापानी जिन्दावाद
हौँ देश ब्यूँझाउने
त्राहीमाम ! (लघुनिबन्ध)
उनको यादले फेरि सतायो
मेरो छेउमा बसेर मेरी श्रीमती रुँदै थिइन्
ऊ, म अनि हाम्रो अनिर्मित सम्बन्ध